Lego Star Wars 75279 ထွန်းပြက္ခဒိန်ဖော်ပြခဲ့တယ်
17 / 06 / 2020 17 / 06 / 2020 ဂရေဟမ် 3895 Views စာ0မှတ်ချက် 2020, 75279 ထွန်းပြက္ခဒိန်, ခရစ္စမတ်, ပွဲတော်, Lego, Lego Star Wars, ရာသီဉတုလိုက်သော, Star Wars
အဆိုပါ Lego Group မှယခုနှစ်ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည် Lego Star Wars ခရစ္စမတ်နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲ set, 75279 ထွန်းပြက္ခဒိန်။
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအဆိုပါ Lego Star Wars ဆောင်ပုဒ်သည်ယခုနှစ်ရုပ်ဆိုးသောခရစ္စမတ်ခုန်များ၊ ကျပန်းအသုံးပြုထားသော Santa dat နှင့်မိုက်ခရိုမော်ဒယ်များပါ ၀ င်သော Advent Adventure အသစ်တစ်ခုကိုထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။ ၇၅၂၇၉ Advent Calendar ကိုသြဂုတ်လ ၁ ရက်တွင်စတင်မည်ဖြစ်ပြီးယူကေတွင်ပေါင် ၂၄.၉၉၊ ယူအက်စ်တွင်ဒေါ်လာ ၃၉.၉၉ ဖြစ်သည်။
သီးသန့်အပိုင်းအစနှစ်ခုပါ ၀ င်သည် - Star Star နှင့် BB-8 Christmas Jumper torsos ။
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်နှင့်အတူခရစ်စမတ်ပွဲအပြီးတွင်ကလေးများသည်လက်ဆောင်တစ်ခုစီကိုနေ့စဉ်နိုးထနိုင်ကြသည် Lego Star Wars ထွန်းပြက္ခဒိန် (75279) အားလပ်ရက်အဆောက်အ ဦး set ကို။ တံခါး ၂၄ ခုစီ၏နောက်ကွယ်တွင်ရှိသည် Star Wars Lego အသေးစားဓာတ်ပုံ Lego ပုံ၊ တည်ဆောက်နိုင်သောကြယ်၊ မော်တော်ယာဉ်သို့မဟုတ်တည်နေရာ။ ဒါ့အပြင်သော့ဖွင့်ဖို့ကုဒ်အဘို့အထွက်ကြည့်ရှုပါ Star Wars: Skywalker စစ်ကိုင်း ဂိမ်းအကြောင်းအရာ။
6 ရှိပါတယ် Lego minifigures နှင့်6Lego ထိုကဲ့သို့သော: D အဖြစ်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ကိန်းဂဏန်းများartခရစ်စမတ်ဆွယ်တာအင်္ကျီနှင့်အတူဇ Vader နှင့် လုပ်ပါ ပွဲလမ်းသဘင် ဦး ထုပ်တစ်ခုနှင့်အတူတစ် ဦး ပုံရိပ်နှင့်အတူတစ်ခြံမှူး playmat ထောင်စုနှစ် Falcon ဖန်တီးမှုကစားလာအောင်နှိုးဆွဖို့ခရစ္စမတ်အလင်းအိမ်နှင့်အတူ။ ဒီအားလပ်ရက်ပြက္ခဒိန်မှာအသေးစား ၁၂ ခုကိုတည်ဆောက်ထားတဲ့ Anakin's Podracer, Republic Cruiser နဲ့ D တို့ပါ ၀ င်ပါတယ်artဇ Vader's ရဲတိုက်။
သြဂုတ်လအစုံအားလုံးနှင့်အတူ, 75279 ထွန်းပြက္ခဒိန် LEGO အတွက်ထူးခြားတဲ့သော့ဖွင့်ကုဒ်ပါဝင်သည် Star Wars: Skywalker Saga.
ဒီအားလပ်ရက်ရာသီကိုလည်းတွေ့လိမ့်မည် အထူးပွဲလမ်းသဘင် Lego Star Wars စတစ်ကာစာအုပ်ဖြန့်ချိ.
လှိုင်းလုံးတစ်ခုလုံး အသစ်အစုံ အပါအဝင်သြဂုတ်လ 1 ရက်နေ့တွင်ရောက်ရှိလိမ့်မည် 75292 အဆိုပါသင်တုန်းမောက်, 75288 ကို AT-AT, 75293 ခုခံ I-TS ပို့ဆောင်ရေး, 75291 မရဏစတားနောက်ဆုံး Duel, 75283 သံချပ်ကာတိုက်ခိုက်ရေး Tank (AAT), 75281 Anakin ရဲ့ Jedi ကြားဖြတ်, Ren သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသင်္ဘော၏ 75284 Knights, 75286 အထွေထွေ Grievous ရဲ့ Starfighter နှင့် 75280 501st Legion Clone Troopers များ. 75279 ထွန်းပြက္ခဒိန် စက်တင်ဘာလ 1 ရက်နေ့တွင်ဖြန့်ချိမည်
← Lego Star Wars 75280 501st Legion Clone Troopers - ပုံရိပ်တွေထပ်ထွက်လာတယ်
LEGO House 40501 သစ်သားဘဲကိုတရားဝင်ပြသခဲ့သည် →